Waamichaa Baratoota Oromoo Universitoota 15 biyya keessa irraa Dhaabilee Oromoo, GPO fi OSA Dhiyyatee.
TOKKUMMAA BARATTOOTA OROMOO YUNIVERSIITOTA 15 (TBOY15):
Nuti barattoonni oromoo dhaabbile barnootaa adda addaa keeessa jirru haala qabatamaa ummanni keenya keessa jiru ilaalchisee yeroo yerootti bifa qindaa'een marii taasisaa turree jirra. Keessattuu egeree ummata keenyaa kan murtaa'u waan amma godhamaa jiruun waan ta'eef qaamot gurguddoo kana keessatti ga'ee qaban jennee waan amannuuuf dhaamsa gababaa kan bifa iyyataan dhiyeessinee jirra.
1.DHAABBILEE SIYAASAA OROMOO:
Akkuma bekamu sabni tokko ulfinaa fi kabajaa isaaf malu goonfatuu kan danda'u yoo gurmaa'e qofaa dha.Oromoonis bifa adda addaan ijaaramaa akka ture ni beekama. Kan keessattis dhaabbileen siyaasaa oromoo ga'ee guddaa akka qaban ifaadha.Haata'uumalee bara dhiyoo asi qabsoon dhaabbileen kunnin taasisaa jiran gara caalu wal gidduuti akka ta'aa jiru hubatama dha. Kunis rincicuu qabsoo keenyaaf sababa guddaadha jennee amannna. Keessattuu bara jaarraa21ffaa kana, jaldeessii fi roobootiin hojii namaa hojjataa jiran, namni kaayyoo tokkoof manaa ba'ee fi afaan tokko dubbatu dubbatee walii galuu dhabuun OROMOON BARA DUKKANAA KEESSA JIRAACHUU AGARSIISA.waan ta'eef:
1.Bara dukkanaa kana keessaa ba'uuf dhaabbileen hundi walitti akka birmatan kabajaan gaafanna!
2.Dhaabni siyaasaa maqaa oromoon ijaarame kamiiyyuu 'OROMOOF' MOO 'OROMOOTTI' akka ijaarrame dhaabbatee xiinxaluu qaba jennee amanna.Kunis sagantaa siyaasaa fi holola cululuqaan osoo hin ta'in hojii guyyuun kan madaallamu akka ta'u jabeessinee gaafanna!
3.Salphinni, tuffiin fi gadadoon amma keessa jirru bu'aa faffaca'uu humna kenyaa waan ta'eef hoggansi oromoo hatattamaan qindaa'ee akka of humneessu amanna.
2.DHAABBILEE SIYAASA IRRA BILISA :
Seenaa addunyaa tanaa yoo ilaalle milkaa'inaa fi guddina saba tokkoof gurmaa'inni dhaabbilee saba tokkoo murteessaa ta'uu dha.Harra gaaffiin oromoo gaaffii siyaasaa ykn kan aangoo miti.Gaaffii akka sabaatti jiraatuu fi dhabamuu.Waan ta'eef:
1.Dhaabbileen bilisaa oromoo qaamota dhimma oromoo irratti hojjatan walitti fiduu fi dhiyeessuuf eenyuma caalaa caraa qabu jennee amannna.kanaafis dirqma seena qabeessa ta'e kana ni ba'u jennee abdanna.
2.Gochaa eebbifamaa fi ummata kenyaaf murteessaa ta'e kana raawwachuu keessattis fedhiin ummata keenyaa duwwaan geddu galeessaan akka ilalamu abdii guddaa qabna.
3.Qaamni gochaa tokkummaa ummata keenyaa laaffisu yaadu ykn raawwatu yoo jiraate bara dukkanaa keessa jirru kana dheeressa waan ta'ef karaa loogii irraa bilisa ta'een ummataaf ibsuun furmaata ta'a jennee abdanna.
3.HAYYOOTA OROMOO MARAAF KEESSATTU JAARMIYAA OSA :
Qaroominni fi guddinni addunyaa kenyaa gumaata namoota xiqqoo yero adda addaatti gara addunyaa kanaa dhufaniin ta'uun dhugaa dirree jiruudha.Ummanni hindi bekaa ta'uu hin danda'u.Oromoon hundis halkan tokkoon qaroome buluu hin danda'u.Qaroo fi hayyuu ofiitu kallattii saba tokkoo akkeka;qajeelchee bakkaan ga'a.
Hayyuun rakkoo ummata isaa hin furre hayyummaan isaa hoo maalin beekamaa?
Nyaatanii buluu fi rafanii ka'uu duwwaan amala jaldeessaa fi waraabessaa malee kan hayyuu tokkoo ta'uu hin danda'u.waan ta'eef:
1.Yeroon kun yeroo murteesaa oromoon bekaa isaa iyyaafatu dha.
2.Yeroon kun yero bekkumsi beekaa oromo itti qoramee seenaa cululuqaa nugalmaa'u jennee amanna.
3.Oromoo bara dukkanaa kana keesaatti callisaan ilaaluun ykn maal na dhinben cinaa taa'uun hidhi xuuxuun bara dukkanaa kana deeggaruu waan ta'eef fudhatama hin qabu.
4, Hayyun oromo tokkummaa oromofi utubaadha. Kanafi hayyoonni oromoo garee qabachuu dhiise, tokko ta’ee, jaarmiyaa oromo tokko godha jennee amanna. Hayyuun kana hin goone yoo jiraate , gochaa diini oromo dalagaa jiru,dalagaa akka jiruu hubachuu qaba. Hayyuun saba tokko, jireenya sabaafi qofaa osoo hin taane, jireenya bineessa bosonaafi bu’aa qaba. ‘‘Yaa ashaboo ofi jettu mi’aayi yookin dhagaa jedhani sigatu jedha oromoon’’.
Walumaa galatti nuti demsaa fi milkii ummata keenyaaf waan barbaachisu hunda gochuufi qophii dha!!!!!!!!
WALII GALAN ALAA GALAN!!!
BAKKA BUUTOTA BARATTOOTAA OROMO:
4 Yuniversitii Wallaggaa
5. Yuniversitii Jimmaa
6 Yuniversitii Harommayyaa
7 Yuniversitii M/Walaabuu
8 Yuniversitii Buleehoraa
9 Yuniversitii Hawwaasaa
10 Yuniversitii A/Minci
11 Yuniversitii Jijjigaa
12 Yuniversitii Walloo
13 Yuniversitii Diillaa
14 Yuniversitii D/Dawaa
15 Yuniversitii B/Daar
March 2012 Finfinnee - Oromia